————————- | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ————————-
Posted by Kaung Kin Pyar on Mar 16, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary | 28 comments
မနေ့ညက အမေ ဖုန်းပြောနေတာပါ….
ကျမက အမေ့ဘေးမှာ စာအုပ်ဖတ်နေတယ်…။ အမေ့ဖုန်းသံကလဲ အတော်ကြည်လေတော့ ဘေးကကျမက ဟိုဘက်က ပြောသမျှ အတိုင်းသားကြားနေရတယ်…
“တင်ပ့ါဆရာလေး….တပည့်တော်က…မနေ့က ဆရာလေးကို သီလရှင်ဝတ်ဖို့ လာလျှောက်ထားတဲ့သူပါ…။ မနေ့က ဆရာလေး မအားလို့ အသေးစိတ်မလျှောက်လိုက်ရတာနဲ့….ဖုန်းထပ်ဆက်လိုက်တာပါ…။ တပည့်တော်..ဘာတွေများ…ပြင်ဆင်ဖို့ လိုမလဲ သိချင်လို့ပါ…ဆရာလေး….”
ဟင်…စကားလုံးကအဆန်းကြီး…။ တစ်ခါမှ မကြားဖူးလို့ ကျမ..ဖတ်လက်စ စာအုပ်ကနေ အမေ့စကားသံကို အာရုံရောက်သွားတယ်….။ ဆရာလေးဆိုသူက ဒီစကားကို ပြန်ရှင်းပါတယ်…။
“ပဒေသာပင် သီးတာကို ပြောတာပါ…..”
သြော်…ပဒေသာပင် သီးတာကိုး…..အင်းအင်းးး (ကျမစိတ်ထဲကပါ…) ဖတ်လက်စ သုခဘုံစာအုပ်ပေါ် မျက်နှာပြန်လွှဲလိုက်တယ်…။
ငွေကြေးတန်ဖိုးတစ်ခုကို ဆရာလေး ပြောတာကြားလိုက်တော့ ကျမ မျက်မှောင်တော့ ကြုတ်လိုက်မိတယ်….။ သြော်…အလှူပဲလေ……
အမေကလဲ… “တင်ပါ့ ဆရာလေး” ပေါ့….။ ဆရာလေးက ဆက်ပြောတယ်….
“အဲ့ဒါ ပဒေသာပင်ချည်းနော်…။ ဆွမ်းစရိတ်မပါသေးဘူး…ယောဂီတွေပါ အပါဆို အပါး တစ်ရာကျော်တယ်….။ အဲ့ဒါလဲ သုံးသိန်းလောက် လှူလိုက်ပေါ့အေ…”
ဒီလို တိုက်ရိုက် amount တစ်ခုကို ထပ်တောင်းလိုက်တဲ့…စကားကြောင့် ကျမ နည်းနည်းတော့ ဒေါသဖြစ်မိသွားတယ်ထင်ရဲ့……
အင်း…ထားပါလေ….ဆွမ်းစရိတ်တော့ ရှိမှာပေါ့…။ ကုသိုလ် ရပါတယ်….။
အမေလဲ “တင်ပ့ါ…ဆရာလေး” လို့ ဆက်ပြောတယ်…..။
“ပြီးရင် ဆံချတဲ့အခါ ရွတ်ဖတ်ပေးတာ ရှိသေးတယ်….။ အဲ့ဒါ ယောဂီတွေပါ ပါတော့…၁၅ ယောက်လောက်တော့ ရှိမယ်..။ တစ်ဦးကို ၃၀၀၀ ဖြစ်ဖြစ် ၅၀၀၀ ဖြစ်ဖြစ် လှူပေါ့….”
ခွီးးးးးးး ကျမ တော်တော်တော့ တင်းလာပြီ…။
ငါ သူတပါး ယောကျာင်္း မိန်းမ ရွတ်ဖို့က ၁၅ ယောက်လိုလား…..။ ပြီးတော့ ယောဂီတွေက ဘာဆိုင်သတုန်း…သူတို့ဟာသူတို့ တရားလာအားထုတ်တာမှာ…ဒါလာရွတ်တာနဲ့ လှူရမယ်တဲ့လား….။ ပြီးတော့ ဒါရွတ်မှ သီလရှင်ဖြစ်ရမှာလား…။ ဘုရားရှင်ရှိစဉ်ကရော…ဒီလို ရွတ်ဖတ်ပြီးမှ သာသနာ့ဘောင်သွင်းတာလား…..။
ကျမ ဖတ်လက်စ စာအုပ်ကို….အသံမြည်အောင် ချလိုက်တော့ အမေက ကျမကို လှမ်းကြည့်တယ်….။ အမေလဲ နည်းနည်းတော့ စိတ်အနှောင့်ယှက် ဖြစ်နေတဲ့ မျက်နှာနဲ့…..။ ဒါပေမယ့်…..ကျမဆီက ပီယ၀ါစာတွေ ထွက်လာမှာစိုးလို့ နှုတ်ခမ်းပေါ် လက်ညှိုးတင်ပြီး တိတ်တိတ်နေဖို့ အချက်ပြတယ်…။
အမေက ဟိုဘက်ကို စကားပြန်ထောက်တယ်..
“၁၅ ယောက်ဆိုတော့ မများဘူးလား ဆရာလေး…။ ပြီးတော့ ယောဂီတွေလဲ မလိုလောက်ဘူးလို့ တပည့်တော်တော့ ထင်တာပဲ…”
“အင်းလေ……ညည်းက လူများတယ်ထင်ရင်လဲ ၁၀ ယောက်ပေါ့…..။ ငါ့တုန်းကဆို လှူတာ သိန်း ၈၀ ကျော်တယ်…..”
ငင်…..သွသူ လှူတာပဲ။ သိန်း ၈၀ ကျော် ဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မယ်….။ ဟုတ်နေရင်တောင် သူသိန်း ၈၀ကျော်လှူတာနဲ့ပဲ တခြားလူတိုင်းက လိုက်လှူရရောလား…..။ ကျမ စိတ်ထဲ ဒေါသတော့ တော်တော်ထွက်နေပြီ….။
“ပြီးတော့ တန်းဆွမ်း ကျန်သေးတယ်…..။ ငါ ခုနက ပြောတယ်နော်…..။ အပါး တစ်ရာကျော်ဆိုတာ…..”
“အော… နောက်ထပ်…ညည်း သီလရှင် ၀တ်စုံချုပ်ရင်…ငါ့အသိဆိုင်မှာ ချုပ်…ငါပြောပေးမယ်….သိလား…ဈေးတော့ နည်းနည်း များပေမယ့် … လက်ရာကတော့ ကောင်းပါတယ်….”
အမေက တင်ပါ့ဆရာလေးနဲ့ အဆုံးသတ်တော့…ဟိုဘက်က ဆရာလေးကလဲ အေး..အေး..ဒီလောက်ပါပဲလို့ ပြောရင်း ..ဖုန်းချလိုက်တယ်….။
ကျမ တော်တော်တော့ စိတ်ညစ်ညူးသွားပါတယ်….
အလှူတစ်ခုကို ပိတ်ပင်ရင် ငရဲကြီးသလား…..???
ကျမကိုယ်တိုင်လဲ အရင်က ဒီလိုပိတ်ပင်ဖို့ မပြောနဲ့…ကိုယ်တိုင်တောင်…တစ်ကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာဆိုရင် မလောက်လေးမလောက်စား လစာလေးထဲက ဖဲ့လှူပါတယ်….။
အမေက…ကျမ ဘာပြောတော့မယ်ဆိုတာကိုသိလို့….အေးပါ… ဒီကျောင်းမှာ သီလရှင်ဝတ်ဖို့ အမေလဲ စဉ်းစားပါဦးမယ်လို့…ပြောတယ်….။
သင်္ကန်းခြုံ ပြီး အလှူဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ အနုကြမ်းစီးတဲ့သူတွေကို ကျမ…ရွံတယ်…။ သူတို့ အကုသိုလ်သူတို့ယူပါလိမ့်မယ်…လို့ ဖြေတွေးတွေးလို့…ရပေမယ့်….ကျမစိတ်ထဲ ဖြစ်သွားတဲ့ မသတီမှုခံစားချက်ကတော့…ကျမပဲ မရင့်ကျက်နေသေးလို့လားတော့မသိ…. ဖျောက်မရနိုင်ဘူး…..
၂ မျိုးပေါ့ ညီမလေးရဲ့။
သီလရှင်တွေမှာ က ဘုန်းကြီးတွေလို ကပ္ပိယတို့ စီစဉ်ပေးတဲ့သူမရှိဘူးရယ်။
အကုန် သူတို့ လုပ်ရ စီစဉ်ရတာ။
လိုအပ်ချက်တွေကလည်း ဘုန်းကြီးတွေလောက်ပဲ လူတွေက လှူချင်ကြတာ။
ဒီလို အလှူရှင်ပေါ်လာရင် လိုအပ်တာကို ပြောတာလည်းပါပါလိမ့်မယ်။
တစ်ချို့ကတော့လည်း လောဘလည်း ပါမှာပါ။
သာသနာ တွင်းက သူတွေက ပမာဏတပ် အတောင်းခံရတာတော့ မကြိုက်ဘူးပေါ့။
မချွိပြောတာကို နားလည်ပါတယ် အမရယ်…။ သီလရှင်ကျောင်းတွေက ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေထက် လှူသူ နည်းပါလိမ့်မယ်….။
ကျောင်းဆောက်ဖို့တို့…တခြား ဆွမ်းစရိတ်တို့အတွက်…သီးသန့်….ပိုက်ဆံအများကြီး….လှူချင်လဲ လှူဖြစ်လိမ့်မယ်….။ ဒါပေမယ့်….ခု.. ပြောပုံအတိုင်းဆို သီလရှင်တစ်ခါဝတ်ဖို့ ၁၀သိန်းဝန်းကျင်လောက်ကုန်မယ်…..။ ငွေကြေးမတတ်နိုင်တဲ့သူတွေဆို ဒီကျောင်းမှာ သီလရှင်ဝတ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့….။ ၀တ်မယ်ထားဦး…တခြားသူတွေနဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမလား…။
အမွန့်တုန်းကတော့ သီလရှင်ဝတ်တာ အိမ်နားက ဘုန်းကြီးးကျောင်းမှာ.. မြို့မှာလည်း သီလရှင်ရှိတဲ့ကျောင်းက မရှိသလောက်ဆိုတော့.. အဲဒီကျောင်းမှာက အဆင်အပြေဆုံးပဲ… သီလရှင်ဆရာကြီးကို အမေက သွားလျှောက်တော့ ကြိုက်သလောက်လှူပါတဲ့.. ကျောင်းမှာတော့ ဆရာလေးအပါး (၂၀)လောက်ရှိတယ်.. မလှူလည်းရတယ်.. တစ်ပါးကို တစ်ရာ နှစ်ရာလောက်လှူလည်း ရတယ်တဲ့.. အမေ့ဆီက အဲဒီစကားကို ပြန်ကြားရတော့ အတော်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်… ဆရာလေးတွေမှာ တစ်ရာနှစ်ရာပဲ အလှူခံရနေကျမို့ထင်တယ်လို့တောင် တွေးမိသွားတယ်.. အဲဒါနဲ့ တစ်ပါးကို တစ်ထောင်ဆီ စာအိတ်ထဲ ထည့်လှူလိုက်တယ်…
ပို့စ်ကို ပြန်ဆက်ရင်.. လိုအပ်တာကို ပြောပြလို့ စေတနာနဲ့ လှူတာက တစ်မျိုးပေါ့.. အခုက ငွေကြေးပမာဏကို ပြောချင်သလောက်ပြောတောင်းနေတာကတော့ စေတနာထဲ မထည့်သင့်ဘူး ထင်တာပဲ..
ဒီကျောင်းက နာမည်ကြီးပါ….။ လှူတဲ့သူတွေလဲ ပေါပါရဲ့….။ ဆွမ်းကိစ္စ ပူပင်ရလို့…တရားဖြောင့်ဖြောင့် အားထုတ်နိုင်အောင်…လှူရတယ်ဆိုရင်လဲ…ဟုတ်ရဲ့…
ခုတော့….ရှိပြီးသားသူတွေက ဘာလို့ လောဘပိုကြီးကြတယ် မသိဘူး….
လမ်းမှာ ဖိနပ်တော် ပြတ်သွားလို့ အလှူတော် ခံတဲ့ ကိုယ်တော်တွေရဲ့ လုပ်ရပ်တော်ထက်စာရင်
.ကျောင်းတော်ကြီးပေါ်ကနေ အကြောင်းတော်ပြပြီး အလှူတော် ခံတာက တော်သေးတော်မူတာပေါ့
စဉ်းစားတော်မူဦးမယ်ဆိုလို့ တော်သေးတော် မူပါရဲ့
ဖိနပ်တော် ပြတ်သွားတာက စေတနာရှိသလောက် အေရဲ့….။ မကောင်းတာတော့ မကောင်းတာပါပဲ…။ လိုင်းကားစီးချင်လှပါချည့်ဆိုလို့…ခရစ်ယန်…နော်ဝေးသူတစ်ယောက်နဲ့ လိုင်းကားအတူလိုက်စီးပေးလိုက်တာ….စာရွက်လိုက်ဝေပြီး အလှူခံတဲ့ကိုရင်နဲ့ တိုးပါလေရော့လား….။ သူမေးလို့ ကိုယ်ဘယ်လိုပဲလှည့်ပတ်ဖြေဖြေ…လိုရင်းက ဒါပဲလေ….။ မမကတော့…မြန်မာပြည်က ဘုရားသားတော်တွေ ဒီလို ဖြစ်နေတာကို နှာခေါင်းတော် ရှုံ့သွားလေရဲ့….။ သို့သော်..ဒါကတောင် စေတနာရှိမှပါ….။
သူဂျီးဘယ်​​ရောက်​​နေပါ့လိမ့်​ သူမလာခင်​ သူ့စကား ဦး​အောင်​​ပြောမှ ​လောကုတ္တရာ …. ဘာသာ​ရေးနွယ်​ဖက်မှာ.. လူတွေရဲ့စွမ်းအား.. အလုပ်အကိုင်.. ပါဝါ.. အင်အားတွေအသုံးများနေတာဟာ..
အခြစ်ကို ဓမြတိုက်လျင်ဂေါ ခြစ်ကင်းကောင်ပြာလေး..
အု​ကျောင်​ဂျီး ဓပြ တိုက်​တယ်​ စိုတာ နစ်​​ယောက်​ထဲတိုက်​လို့ မရဘူးဗျ ။ အနဲဆုံး လူငါး​ယောက်​ရှိမှ တည်​ဆဲ အုပ​ဒေ အရ ဓပြမှု ​မြောက်​တယ်​ ။
ဟုတ်တယ် အူးကြောင်…. အူးကြောင် တျောက်ထဲတော့ ဓပြတိုက်မြ၀ူးလေ…..။ ရွာသားတွေကလဲ ပါမယ်မဟုတ် (ဟုတ်တယ်နော့ ဆြာနေ) ဆိုတော့ ဓပြတိုက်ခြင်း လုပ်မြတော့ဝူးးးးးး
အခြစ်ကို ဓမြတိုက်ဒဲ့ ခေတ်ဟုတ်တော့ဘူး.. ဒဘိတ်မှောက်တဲ့ခေတ်တွားပွီ။
တကယ်​သီလရှင်​၀တ်​ဖို့ပဲသက်​သက်​ဆိုရင်​​တော့ သာမန်​​ကျောင်း​လေး​တွေမှာဝတ်​ပြီး တသိန်း​လောက်​လှူရင်​ကို ၀မ်းသာ​နေကြမှာပါကွယ်​
သီလရှင် ၀တ်ရုံပါပဲ….။ တခြား ချဲ့တာမျိုးမရှိဘဲ…ကြားရက်ဖြစ်နေလို့ ကောင်းကင်ပြာတို့တောင် လိုက်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး….။ အမေ့ ညီမ (၂)ယောက်လောက် အတူလိုက်ရုံနဲ့ ပြီးမှာပါ….။ အမေ့သူငယ်ချင်း အန်တီတစ်ယောက် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်လောက်က အဲ့ကျောင်းမှာ သီလရှင်ဝတ်ဖူးတယ်ဆိုလို့ စုံစမ်းရာကနေ…..
အသိတယောက်က မကြာခဏတရားစခန်းဝင်လေ့ရှိတယ်။ သူတို့ဝင်တဲ့တရားစခန်းက ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းအကျယ်ကြီးမှာ အနောက်ဖက်ကို ယောဂီဆောင်တွေဆောက်ပေးပြီးသီလရှင်တွေကို တရားပြရင်း တရားစခန်းစောင့်ရှောက်ဖို့တာဝန်ပေးထားတယ်ပေါ့။ နောက်တော့ သူတရားစခန်းမဝင်တာ တော်တော်ကြာနေတော့မေးကြည့်တာပေါ့ တရားစခတ်းမဝင်တာကြာပြီနော်လို့ဆိုပီး။ သူကရီပီးပြန်ပြောတာက အမှု့ဖြစ်နေလို့ တရားစခန်းပိတ်ထားသတဲ့။ တရားစခန်းကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရတဲ့သီလရှင်ဆရာကြီးက ဘုန်းကြီးဆီက မြေတခြမ်းရလိုမှု့တရားစွဲထားလို့ပါတဲ့။
လောကီအရေးစိတ်ကုန်လို့ လောကုတ္တရာထဲ ၀င်ခါမှ…လောကီထက် ရှုပ်တာတွေ ဖြစ်နေတယ်…။
သူတို့မှာလည်း သူတို့အ​ရေး သူတို့ပြသနာ​တွေက ​လောကီအ​ရေးထက်​​တောင်​များ​နေတတ်​တာ​တွေရှိပါတယ်​မွသဲ​ရေ
ကားပြိုင်​ ​ကျောင်းပြိုင်​ ဖုန်းပြိုင်​။
ဒါကြောင့်လဲ တကယ်တရားရသွားပါတယ်ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက လူတွေကိုရှောင်တာ ဖြစ်မှာပဲ…နော်…။ သီလရှင်ဘ၀မှာတောင် အပူတွေများနေရတယ်လို့….
ပြောရမယ်ဆို ကျုပ်အဖွားက မယ်သီလရှင်ကြီးအနေနဲ့ ပထမကတော့ ထောက်ကြန့်က ပုပ္ပါးကျောင်းမှာဝတ်တယ်၊ ၀တ်ဆို ကျုပ်အဖိုးက မှော်ဘီသံချပ်ကာတပ်ရင်းမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်း တိုင်းပြည်တာဝန်ကို ရွပ်ရွပ်ချွံချွံထမ်းဆောင်နေတုန်း ရေချိုးခန်းထဲမှာ ချော်လဲပြီး ဦးဏှောက်သွေးကြောပြတ်ဆုံးတာကိုး။ ဖြစ်ချင်တော့ ကျုပ်အဖွားက ငယ်ငယ်ကတော်တော်ချောဆိုပဲ။ အသက်ကြီးတဲ့ထိ သွားတွေမစုံတာရယ်၊ အရေပြားတွေတွဲတာရယ်၊ ခါးလေးကိုင်းတာရယ်ကလွဲရင် တော်တော်ချောတာလား။ ဒီတော့ မသေခင်က ကျုပ်အဖိုးက မေးဖူးတယ်၊ ငါသေရင် နင်ဘာလုပ်မလဲတဲ့၊ နောက်ယောကျာ်းယူမှာလားဆိုတော့ မယ်သီလရှင်ဝတ်မယ်လို့ ကတိပေးခဲ့လို့ဆိုပြီး ကျူပ်အဖိုးလဲဆုံးရော သူလဲ မယ်သီလရှင်ဝတ်ပါရော။ သားသမီး ၈ ယောက်ပါ သူ့ကျောင်းပေါ် သောင်တင်လေရောပေါ့။
သူဝတ်တုန်းက သူ့အသက် ၂၇၊ ဆုံးတော့ ၉၅၊ တစ်သက်လုံးဝတ်သွားတာလား ကိုကောင်းကင်ပြာရဲ့။ ကျုပ်လဲ အဖွားဆီသွားလည်တိုင်း (နောက်ဆုံးနေသွားတာ မန္တလေး တင်များရှင်ကျောင်းတိုက်) သူတို့တွေရဲ့ ကျောင်းမြေနေရာလုမှု၊ ကျောင်းအရောင်းအ၀ယ်၊ ငွေတိုးချေးစားမှုပြဿနာတွေ၊ ဘုန်းကြီးကို ဟင်းပွဲကောင်းကောင်း ဆက်နိုင်တဲ့ မယ်သီလကတော့ ဘယ်လို၊ ဘယ်ဆရာတော် မျက်နှာသာပေးအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာက တစ်ဖုံ၊ ဘယ်နေရာကတော့ အလှူခံထွက်ရင် ဈေးကွက်ကောင်းတယ်၊ ဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာ ဘယ်နေရာသွားသင့်တယ်ဆိုတာကတစ်မျိုး၊ အတော်လေး နောကျေခဲ့ပါတယ်။
ဆိုတော့… မယ်သီလရှင်ဝတ်တယ်ဆိုတာ တရားကို ဖြောင့်ဖြောင့်အားမထုတ်နိုင်တဲ့ ဒုက္ခသည်များသာဖြစ်ပါကြောင်း။ တစ်ကယ်လို့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ တရားအားထုတ်ချင်တယ်ဆို ယောဂီဝတ်တာက အကျိုးပိုများပါတယ်။ မယ်သီလရှင်ဘ၀ကတော့ မကောင်းကြောင်းနဲ့ လက်တွေ့လောကမှာ အဲ့လို စီးပွားရှာနေရတဲ့ သီလရှင်ဆရာကြီးများကတော့ အားလုံးတာဝန်ယူထားရတော့ တရားမရှာနိုင်ဘဲ ငွေအရင်ရှာနေရတာဖြစ်ပါကြောင်း။
ပြောရရင်လဲ ဆုံးမယ်မထင်တော့ပါဘူး ကိုကောင်းကင်ပြာရယ်။ ရွာထဲမှာ တုတ်(ဒုတ်)ဆွဲ၊ ဓါးဆွဲ ဖြစ်ကုန်ပါ့မယ်။ ဂလောက်နဲ့ တော်လောက်ထင်။ မျက်စိလည် လမ်းမှားလာတုန်းလေး ပြောပြချင်တာလေးပေါ်လာလို့ တစ်ချက်လှမ်းအော်ပြောသွားပါကြောင်း….။
မှားတာဗျာ (တင်များရှင်) မဟုတ်ဘူးနော်၊ ဆင်များရှင်
ယောဂီလဲ မထူးပါဘူး ကိုကြွေလွင့်ပန်းရယ်….။ အဖွားဆီလတိုင်းလာလည်တဲ့ ယောဂီအဖွားတစ်ယောက် ရှိပါတယ်….။ ကောင်းကင်ပြာအဖွားကလဲ စကားပြောဖော်လိုချင်၊ ဟိုဘက်အဖွားကလဲ စကားပြောဖော်လိုချင်နဲ့မှာ… အင်းးးး တရားအကြောင်း နည်းပါတယ်….။
သီလရှင်ဆိုတာ.. ထေရီ..။ ဂေါတမဗုဒ္ဓခွင့်ပြုတော်မူတဲ့ … ရဟန်းမကို မြန်မာပြည်မယ်… လုပ်ခွင့်မရှိဘူး.. မရဘူးဆိုပြီး.. ထေရာဝါဒက….ရဟန်းဝတ်တဲ့မိန်းမတွေကို နှိမ်ချခေါ်တဲ့ အခေါ်ပါ..။
သီလရှင်အစ မယ်ကင်းကတဲ့…။ မင်းတုန်းမင်းလက်ထက်ကပေါ့..။
မယ်ကင်းခမြာလည်း.. ဗန်းမော်ဆတော်ကြီးရဲ့..ညစ်ပတ်တဲ့.. အဆဲတွေတော်တော်ခံရရှိပြီးမှ.. သီလရှင်အဆင့်လောက်ရခဲ့တာတဲ့…။ အောက်မှာ.. ဗန်းမော်ဆတော်ကြီးက.. သီလရှင်မယ်ကင်းဆီရေးတာလေးတွေဖတ်ကြည့်…။
ဒီခေတ်မီဒီယာတွေ.. ထေရာဝါဒရဲ့ပုံရိပ်အစစ်ကို.. လှစ်ပြဖို့..တာဝန်ရှိတယ်..။ အချိန်ကျပြီထင်…။
“ ဘိက္ခူနီ ဆရာကင်း တဏှာကွင်းစွပ်မယ်၊ ဗလာကျင်းဝတ်ထည် ကို၊ ချွတ်ပယ်မယ်ကုန်ဖွင့်၊ ကူပွေ့ လို့ လူတွေ့ ခံတယ်၊ မြူရွှေ့ ဟန်ဆိုးတဲ့ အကျင့်၊ ပြာတဆုပ် နှင့် မဂ်သုတ်သင်တယ်၊ စက်ဆုပ်ချင်သထင့်၊ မန်းသေလာတောင်မြင့်မှာ၊ ဖေါ်မလင်ဧကစာ၊ လင်မျှော်ကာ ပန်ရည်ရိပ်ကယယ်နှင့် ကြံစည်စိတ်များလှတော့သာ၊ ပုတီးသုံးလို့လူပုန်းရှာတယ်၊ သူနှုန်းကာ ငြိမ်သက်နှင့်၊ ကြံရက်တဲ့သီလသယ်၊ ထူးပေ့ အံ့ဖွယ်၊ လောဘနှင့် မောဟ တွယ်သည်၊ တောခတယ် မယ်ကင်းတဲ့ လေး ”
“ အိမ်း ဘုရားဆု မတောင်းမီ ငါ့ ပေါင်ကြားထဲ က ဟာ ကို နင့်ပေါင်ကြား အလျှင်ရောက်အောင်ဆုတောင်း ဦး လို့ပြောလိုက်”
“ နှုတ်သီးရယ်စွာ၊ ( ပုတ်) ကြီး အာတာတာ နှင့် ဖာမယ်သီလ ၊ အကျင့်ရယ်တန် မသင့်တာ အမြင်သန်လို့ ၊ နင့် အကြံ ၀သီဆိုးတယ်၊ ( ယိုး ) လိုက်ချင်လှ ” ဟူ ၍ ဖြစ်ပါသတည်း။
16 March 2015 17:33(+0630) (လွန်ခဲ့သော 14 နာရီ ခန့်က)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းက အနောက်ဘန်ဂေါ ပြည်နယ်မှာ အသက် ၇၂ နှစ်အရွယ် ခရစ်ယာန် သီလရှင်တယောက် အုပ်စုဖွဲ့ အဓမ္မပြုကျင့် ခံရတဲ့ ကိစ္စကို မကျေနပ်တဲ့ အတွက် ကျောင်းသားတွေ ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။
ဒေါသထွက်နေတဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာ ကြွေးကြော်သံတွေ ဟစ်အော်ကြပြီး တရားမျှတမှုကို ဖော်ထုတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုကြတာပါ။ ဘယ်ပါတီကိုမှ ကိုယ်စားပြုတာမဟုတ်ဘဲ လူသားဝါဒသာ ပဓာန ဖြစ်တယ်လို့ သူတို့ ကိုင်ထားတဲ့ နဖူးစီး စာတမ်းတွေမှာ ရေးထားပါတယ်။
ဆန္ဒပြကျောင်းသားတွေထဲမှာ အမျုိုးသမီးငယ်တွေလည်း အမြောက်အမြား ပါဝင်ပါတယ်။ ကျမတို့ အမျိုးသမီးတွေ၊ မိန်းကလေးတွေဟာ ဘယ်သွားသွား မလုံခြုံတော့ဘူး။ သွားလာဖို့ ကြောက်နေကြတယ်။ တရားခံတွေကို ဖမ်းပေးပါဆိုပြီး ဆန္ဒပြကျောင်းသူတယောက် တောင်းဆိုပါတယ်။
အဘွားအရွယ် ခရစ်ယာန်သီလရှင်ဟာ စနေနေ့ မနက်အစောပိုင်းက သူနေထိုင်တဲ့ သီလရှင် ကျောင်းပေါ်မှာပဲ လူ ၅ ယောက်က အဓမ္မပြုကျင့်တာကို ခံခဲ့ရပြီး အခုတော့ ဆေးရုံတင်ထားရပါတယ်။
လက်ရှိ အာဏာရ ဘီဂျေပီပါတီ ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ လော့ကစ် ချက်တာဂျီ က သီလရှင်ဟာ သူကြုံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကြောင့် အိပ်မပျော်နိုင်ဖြစ်ပြီး စိတ်ဖိစီးမှု ဝေဒနာ ခံစားနေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အနောက် ဘန်ဂေါပြည်နယ် အစိုးရကလည်း တရားခံတွေကို ခြေရာခံနိုင်ဖို့ သတင်းပေးကြဖို့ ပြည်သူတွေကို ဆော်သြထားပြီး အမြန်ဆုံးအရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ကတိပြုထားပါတယ်။
သီလရှင် မယ်ကင်းကို ဗန်းမော်ဆရာတော်ကြီး မိန့်တဲ့…
ဒါလေးကိုတော့ တချို့စာအုပ်တွေထဲ ဖတ်ဖူးတယ် သဂျီးရဲ့….
အိန္ဒိယက ကိစ္စတော့ သိသေးဖူးရယ်…..။
သူကြုံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကြောင့် အိပ်မပျော်နိုင်ဖြစ်ပြီး စိတ်ဖိစီးမှု ဝေဒနာ ခံစားနေရတယ်ဆိုလို့ စိတ်မကောင်းဖူး…..
တချို့ကျောင်းတိုက်တွေလဲ အဲ့လိုမဟုတ်ရှာပါဘူး ကင်းကောင်လေးရယ်…
တစ်ခါ မွေးနေ့သွားလှူ ဖူးပါတယ်.. သဒါပေါက်သလောက်ပါပဲ…
နာမယ်ကြီးကျောင်းတိုက်တွေက ပိုဆိုးသလားလို့ …
ဟုတ်မယ် မ၀ါးရေ….။ ကျောင်းတိုက်တွေတော့ မတူလောက်ပါဘူး….။ ဒါပေမယ့် အမေပြောတဲ့ ဖုန်းကို ဘေးနားကနားထောင်မိရင်း….အကုသိုလ်များမိတာပါ….။
သီလရှင်ကျောင်းတွေက ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေလောက် အလှူရှင်မရှိတာကိုလဲ နားလည်ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက်ဘယ်လောက်နဲ့..တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဆိုတော့လဲ….
သီလရှင် ဝတ်တာ နဲ့ ဒီ အတိုင်း ယောဂီ ဝတ် တာ ဘာများ ကွာလို့ လဲ ကင်းကောင်လေး ရယ်။
သီလရှင်ဘာကြောင့် ဝတ်ကြ တယ် ဆိုတာ စဉ်းစားလို့မရ။
(သူကြီး ဘက်တော်သား မဟုတ်ကြောင်း လဲ ကြို ပြောထားပါသည်)
PS – အပေါ်နား က မှတ်ချက်များ ကို မဖတ်မိ မှီ အရင် ရေးထားလိုက် သော မှတ်ချက် ဖြစ်ပါသည်။
သူတို့ နှင့် ဘာမှ မသက်ဆိုင်ပါကြောင်း။
ရေးပြီး မှ သူရို့ ရေးတာ ဖတ်မိတာ။
-တစ်ခါတစ်တော့လဲ ..တောကြိုအုံကြား လှည့်သွားပြီးး.
-ဆင်းရဲသားအစစ်တွေကို ရှာပြီး လှူချင်စိတ်ပေါက်တယ်…
-ဘာသာရေးမှာတောင် ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွဲနေတာမြင်ပီး စိတ်ပျက်လို့
ကောင်းကင်ပြာ သာ သီလရှင် ၀တ်လိုက်ရင်
သီလရှင် ၀တ်စုံနဲ့ အတော်လိုက်မှာဗျ…။
ကျန်တာတော့ ဦးဘလက်က သိတ်မမီ လို့